Omenala - Dongguan Walley Machinery Technology Co., Ltd.
Ọhụụ ụlọ ọrụ (gosipụtara ọnọdụ na nkwenye nke njikwa kacha elu)
A. Bụrụnụ ndị kasị asọmpi soplaya na nkenke machining ụlọ ọrụ
B. Na magburu onwe akụrụngwa na ikenyeneke mbiet technology na-kacha mma na-akwado na-eweta ọrụ na nkenke machining ụlọ ọrụ
C. Mepụta elu àgwà ọkachamara nkenke machining soplaya
Corpolọọrụ ozi: (ya na ụfọdụ ọrụ mmadụ)
Inweta CNC nkenke machining dị ka ụgbọelu, ọ na-emepụta uru maka ndị ahịa na ọfiọkde okpukpu abụọ owuwe ihe ubi nke ọrụ mmụọ na ihe onwunwe mmepeanya.
Iwu amụma:àgwà gbakwasara, kacha mma; ịga n'ihu mma, afọ ojuju ndị ahịa
Environmental policy:chekwaa ume ma belata ihe mkpofu; chebe ụwa ma gbochie mmetọ;
Anyị kwesịrị isoro iwu na ụkpụrụ, kwado akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, mee ka ndị mmadụ mara ọzụma ma meziwanye.
Valueskpụrụ isi: kpachapụ anya ọrụ, ego na mmefu, ike n'ezi management, ahịa nweta.
"Ahịa" ebe a pụtara na-anọchi anya ndị ahịa, ọrụ, suppliers, ụlọ ọrụ na otu!
Nzube ahia: mgba, ihe ọhụrụ, ọbụbụenyi na nraranye, na-arụ ọrụ nke ọma ma na-arụ ọrụ nke ọma.
Na-alụ ọgụ:ịrụsi ọrụ ike bụ àgwà onye ọ bụla n’ime anyị ịrụsi ọrụ ike. Ozugbo anyị kwụsịrị, anyị ga-ewepụ. Ya mere, anyị na-ekwusi ike na anyị kwesịrị ịdị na-eso ibe anyị ọsọ, na-agba ume ịgafe oge, na-ajụ iche echiche inwe ọganihu;
Mmepe na Innovation:imeputa ihe ohuru nwere ike ime ka oghere ahu di elu banyere oru a. Na ebumnuche nke ime ihe kwekọrọ na iwu, ndị ọrụ niile nwere ike isonye n'ọtụtụ ebe dịka usoro ọhụụ na usoro ihe ọhụụ site na mmemme ọmụmụ ihe sara mbara, iji wee mata ndị ọrụ niile;
Ikike na nraranye:ndị mmadụ gbakwasara bụ nkà ihe ọmụma azụmahịa nke Jixin. Anyị na-akwado ọdịbendị ezinụlọ ma hapụ ndị ezinụlọ si n'akụkụ ụwa niile ka ha dịrị n'otu wee hụ ibe ha n'anya, chịkọta ike, dị njikere inye onyinye, na-enyere ibe ha aka, na-ahụ ọrụ n'anya ma na-ahụ Wally n'anya, ma were ụlọ ọrụ dịka ụlọ;
Pragmatic na oru oma:n'echiche nke ịdị n'otu, imekọ ihe ọnụ ma ghara ileghara ọrụ anya, anyị nwere ike mezuo ebumnuche ahụ nke ọma. Site na usoro dị irè, anyị nwere ike ikwurịta okwu nke ọma, hazie ma dozie nsogbu ahụ n'ụzọ zuru oke, bido na njedebe.